ONE Championship ရဲ့ CEO “Chatri Sityodtong” ပြောတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်း ၁၀ ချက် In:Kawi Inspires, Life Hacks
ဘယ်အရာကိုမဆို သင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်တာထက် ပိုလုပ်နိုင်ပါတယ် In:Kawi Inspires, Life Hacks
အနာကျင်ရဆုံးအချိန်တွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရင်တော့ ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ် In:Kawi Inspires, Life Hacks
နေပူပူကိုအံတုဖို့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး သရက်သီးအချိုပွဲ လုပ်နည်းများ In:Kawi Eats
တစ်ခါတလေမှာ သင့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအင်က အရမ်းကိုစွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? ကျွန်တော်က သဘာဝလွန်နယ်ပယ်တွေ၊ သဘာဝလွန်ပညာတွေမှာ သိပ်ပြီးအယုံအကြည်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် စိတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုတော့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ စိတ်စွမ်းအင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ပြီး အသက်မွေးနေတဲ့ လူတွေတော်တော်များများကို ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အဒေါ်ဆိုင်မှာ ကုန်ထမ်းသွားဖူးတဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်လောက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်နိုင်တာ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ သူများတွေက မနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းထမ်းပြီးရင် ညနေပိုင်းနားလေ့ရှိပါတယ်။ ညနေပိုင်းလုပ်လေ့ရှိတဲ့လူတွေက မနက်ပိုင်းနားပြီး နေလည်မှစတင်လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင် မနက်ဆိုင်း၊ ညဆိုင်းလုပ်လေ့ရှိကြတာပါ။ ဒီဦးလေးကတော့ မနက်ဆိုင်းရော၊ ညဆိုင်းပါ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်ကိုလည်း အပြည့်အဝလုပ်လေ့ရှိပါတယ် (ကိုယ်ထမ်းတဲ့ အိတ်အရေအတွက်အလိုက် လုပ်ခရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။ ဒီဦးလေး ဘာလို့ဒီလောက် အလုပ်လုပ်နိုင်နေတာလဲ? လူတစ်ယောက် ဒီလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်တာက လွယ်တော့မလွယ်ကူပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဒီလောက် အပင်ပန်းခံနိုင်နေတာ အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက သာမန်ခန္ဓာကိုယ်လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကောင်သေးပြီး သန်မာတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ဖူးတာဆိုတော့ သူလည်းသန်မာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကိုယ့်မေးခွန်းကိုယ်ပြန်ဖြေပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ထားလိုက်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင် တစ်နေ့မှာဒီဦးလေး ဒီလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါတယ်။ သူရဲ့ လုပ်ခလစာ ရှင်းတဲ့အချိန် နောက်ကလိုက်လာတဲ့ လေး ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကို လက်မှာဆွဲထားပြီး လမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်တတ်သေးတဲ့ ကလေးကိုချီထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည် သူ့မိန်းမကိုတွေ့့လိုက်လို့ပါ။ အရင်ကတော့ သူ့ရဲ့ဇနီးက ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ စျေးရောင်းတာကြောင့် အဆင်ပြေသလိုရှိပေမယ့် နောက်ထပ် ကိုယ်ဝန်ထပ်ပြီးရတဲ့အခါမှာ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ သူဒီလောက်မှ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာရှိနေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်မိခင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုထမင်းစားကြမှာလဲဆိုတဲ့ အသိစိတ်က သူ့ကိုဒီလောက်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်လို့ပဲ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါက စိတ်စွမ်းအင်အကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်မယ်မထင်ထားတဲ့ အရာတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်နိုင်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေးရမှာက ဒီစိတ်စွမ်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက်အသုံးချ အောင်မြင်မှုကိုရယူပြီး ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာပါ။ ပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော်သတိထားမိတာက ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာ တွန်းအားတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နိုင်မယ်ထင်တာထက် ပိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ တွန်းအားဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ဒီလိုအခက်အခဲတစ်ခု၊ ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ရှိနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာထက် ပိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုအတွက် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာထက် ပိုလုပ်နိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ဒါကလည်း တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကို်ယ်လုပ်နိုင်တာက ဒီလောက်ပါပဲဆိုတာကို ဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်ကြီးကျယ်တဲ့ ဘယ်အောင်မြင်မှုကမှ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါက ချန်ပီယံတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ချန်ပီယံတွေဆိုတာ အားလုံးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေသူတွေပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ သူများတွေလုပ်နိုင်တာထက်ပ ိုလုပ်နိုင်နေဖို့လိုအပ်သလို ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်ထင်တာထက်လည်း ပိုလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးက ကိုယ်ကျရှုံးလာပြီလို့ခံစားရတဲ့အချိန်၊ ရှေ့ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး အရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်လို့ တွေးမိတဲ့အချိန်တိုင်း “အခုငါလုပ်နေတာထက် ငါပိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ရှေ့ဆက်နိုင်တယ်” လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Ag Nyi ...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကိုမေးဖူးတယ်။ လူတိုင်းကဘာလို့ မအောင်မြင်နိုင်ရတာလဲ? ချန်ပီယံတစ်ယောက် ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရတာလဲ? လို့မေးတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း “ဒါကတော့ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါနဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကွာသေးတာပေါ့ကွာ” လို့။ သူငယ်ချင်းက ငါဒါတွေကို နားလည်တယ်လေ။ ငါစကားစပြောတာမှားသွားတာကွ လူတိုင်းဘာလို့ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ရတာလဲဆိုတာထက်၊ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတဲ့ လူတစ်အုပ်စုမှာ ဘာလို့တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ပဲ ချန်ပီယံဖြစ်တာလဲ? လို့ သူငယ်ချင်းကထပ်မေးတယ်။ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားမိသွားတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ အခြားကိစ္စတစ်ခုဝင်လာတာနဲ့ ဒီအကြောင်းကို ဆက်မပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့ အတွေးရောက်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလိုက်ဖတ်ကြည့်၊ စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ အဖြေတစ်ခုတော့ထွက်လာတယ်ပြောရမှာပဲ။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းနဲ့ ညနေသွားတွေ့တော့ မင်းမေးထားတဲ့မေးခွန်းကို ငါအဖြေရသွားပြီလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဖြေက ရိုးရှင်းပါတယ်။ “ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ရင် ချန်ပီယံတွေလိုကျင့်ကြံဖို့လိုတယ်”။ ချန်ပီယံတွေဘယ်လိုကျင့်ကြံလဲဆိုတော့… ၁. စိတ်အားတက်ကြွချိန်နဲ့ အချိန်ဇယား သာမန်လူတွေက စိတ်အားတက်ကြွမယ့်အချိန်၊ လုပ်ချင်စိတ်ရှိမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ချန်ပီယံတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ထိပြီးမြောက်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ အပေါ်ယံသာလွယ်ကူတယ်ထင်ရပေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ပညာရပ်ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ MMA ချန်ပီယံ ကိုဖိုးသော်ပြောဖူးတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ လက်ဝှေ့ထိုးတစ်ချီထိုးပြီးလို ့နားတဲ့အချိန်မှာ ထိုးတဲ့သူကိုပြုစုပေးရတဲ့အခါ ထိုးသူအမောပြေအောင် အသက်များများရှူနိုင်အောင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ လေရအောင်ခတ်ပေးရပါတယ်။ ဒီလိုခတ်ပေးတဲ့အခါမှာတောင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ လေပိုရအောင်ခတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ပညာရှိပါတယ်။ ဒါကိုသူက သပ်သပ်ကိုသေချာသင်ယူခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သင်သာ တကယ်လို့ ပညာတစ်ခုကို လုပ်ချိန်စိတ်ရှိမှသာထလုပ်မယ်ဆိုရင် ချန်ပီယံဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………. ၂. ရလဒ်နဲ့ အလေ့အကျင့် သာမန်လူတွေက ရလဒ်တစ်ခုအတွက်ပဲ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတတ်ပြီး ချန်ပီယံတွေကတော့ အမြဲတမ်းတိုးတက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်ကိုရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဥပမာ gym ဆော့တယ်ပဲ ထားပါစို့။ သာမန်လူတွေက6pack ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုအတွက်ပဲ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ရသွားပြီဆိုရင် ဆက်လုပ်ဖြစ်ချင်မှ လုပ်ဖြစ်မှာဖြစ်သလို၊ ရထားတဲ့6pack လေးပျောက်ဆုံးမသွားအောင်ပဲ ထိန်းသိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်မသွားဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းတိုးတက်နေအောင် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်နဲ့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃. ထင်မြင်ချက်နဲ့ အမှန်တရား သာမန်လူတွေက ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်ပြီးတော့ ချန်ပီယံတွေကတော့ အမှန်တရားနဲ့ရှင်သန်ပါတယ်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေ အားလုံးကိိုုလိုက်ခံစားပြီး လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်အတွက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ထင်မြင်၊ ဝေဖန်နေသူတွေအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ချန်ပီယံတွေကတော့ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေထက် အမှန်တရားကိုသာလက်ခံပြီး လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄. လုပ်နိုင်သလောက်နဲ့ လုပ်နိုင်တာထက်ပိုသော သာမန်လူတွေက သူနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ချန်ပီယံတစ်ယောက်ကတော့ သူ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ထင်တဲ့ အဆင့်ကိုကျော်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၅. ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ သာမန်လူတွေနဲ့ ချန်ပီယံတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေထဲက အဓိကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေက ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါ ရပ်တန့်သွားပြီး ချန်ပီယံတွေကတော့ ပိုပြီးတိုးတက်လာပါတယ်။ သာမန်လူတွေက ကျရှုံးမှုတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျ အလျော့ပေးသွားတတ်ကြပြီး ချန်ပီယံတွေကတော့ ကျရှုံးမှုတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ပိုမိုတိုးတက်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီး အာနိုးပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ “သာမန်လူတစ်ယောက်နဲ့ ချန်ပီယံတစ်ယောက်ရဲ့ ကွာခြားချက်က ချန်ပီယံတွေဟာ အနာကျင်ရဆုံး အချိန်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်လို့ပါ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ချန်ပီယံဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ ...
အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်း ၁၀ ချက်ဆိုတော့ ဒီစည်းကမ်းတွေကို ပြောနေတဲ့လူက အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။ ဒီတော့ Chatri Sityodtong ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ??? Chatri ဆိုတာ တစ်နေ့ကို ၄ ဒေါ်လာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝ၊ သူ့မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို ခရီးဆောင်အိတ်ထဲထည့်ရင်တောင် အကုန်ဝင်တဲ့ဘဝကနေ အာရှမှာအကြီးဆုံး sport brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ONE Championship ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင် CEO တစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့လို အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိနို်င်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်း ၁၀ ချက်ကို မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ စာလေးနဲ့ စည်းကမ်း ၁၀ ချက်ကတော့… ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဧည့်သည်ဟောပြောသူအဖြစ် မကြာခဏဟောပြောတာတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါတိုင်း ကျောင်းသားတွေက “ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုရှိဖို့အတွက် အဓိက သော့ချက်ကဘာလဲ?” လို့မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမှန်အတို်င်းပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း တခြားလူတွေလို လေ့လာသင်ယူနေရတုန်းပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် လိုက်နာလေ့ရှိတဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီနေရာကနေထိုင်နေပြီးတော့ ငါအားလုံးကိုသိတယ်လို့ပြောနေလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့လူတစ်ယောက် မဟုတ်လို့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မှာလည်း တခြားလူတွေကို အဆင်ပြေတဲ့နေ့တွေနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့နေ့တွေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်မှာတော့ အပြည့်အဝယုံကြည်ပြီး အမြဲတိုင်းလိုက်နာနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ၁. ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ နေထိုင်ပါ။ သင့်ဘဝမှာ အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတွေရှိခဲ့ရင်တောင် သင့်ရဲ့အမေ ဂုဏ်ယူရလောက်တဲ့ ဘဝမျိုးမှာနေထိုင်ပါ။ ဘယ်သူမှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းနိုင်ကြသလိုပါပဲ။ လူတိုင်း ကျရှုံးတဲ့အခါတွေရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံးရွေးချယ်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ နေထိုင်သွားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်သူမှစောင့်ကြည့်မနေရင်တောင် မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၂. သင့်ရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်တောင့်တတာကိုသာ လုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ သင်ယူရရှိခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် အားလုံးကလွဲမှားစွာခံယူထားတဲ့ အောင်မြင်မှုက ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပါ။ အမှန်က အောင်မြင်မှုဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုကသာ အောင်မြင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလိုက်တဲ့အခါ အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေဟာ အရှင်သန်ဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားအင် (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းကို နေ့စဉ်ရဲ့ မိနစ်တိုင်းမှာ ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေးစွမ်းနိုင်လာတဲ့အခါ ထူးခြားတာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မက်တွေက တကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာက ဘဝမှာ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရာတွေ၊ လူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားက အကြောင်းပြချက်မရှိ၊ စဉ်းစားခြင်းမရှိပဲ ရွေးချယ်တာပါ။ သင်တစ်ခုခုကို ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်ကို တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ ခံစားရရင် အဲဒါသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ(လူတစ်ယောက်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အရာ၊ တရားမဝင်တဲ့အရာတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့)။ ကမ္ဘာကြီးက အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနောက်ကိုပဲ မမြင်မစမ်းနဲ့လိုက်နေတဲ့ လူမျိုးတွေကို အလိုမရှိပါဘူး။ တကယ်အသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ အရာအားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်းတီးပေးချင်တဲ့လူမျိုးတွေကို လိုအပ်တာပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုမှာ အောင်မြင်မယ့်အစား ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ပဲ ကျရှုံးဖို့ပဲ စွန့်စားလိုက်ချင်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃. လေးစားအားကျရတဲ့လူကို ရှာပါ။ အောင်မြင်မှုမှာ သဲလွန်စရှိပါတယ်။ သင်အောင်မြင်ချင်တဲ့နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့လူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် သင်လေးစားအားကျရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုရှာပါ။ သင်က အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် အရမ်းချစ်ကြတဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးအတွဲတစ်တွဲ ဘယ်လိုချစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကို လေ့လာပါ။ သင့်ရဲ့အိမ်မက်က သင့်ရဲ့နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် သင့်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးရှေ့နေတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပညာတွေကို ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့လဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ သင်က ကမာ့္ဘချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုကမာ့္ဘချန်ပီယံတွေ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာကို လေ့လာပါ။ သင်က မီလျံနာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်တစ်နေ့သူ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မီလျံနာတစ်ယောက်ကိုရှာပါ။ သင်က စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်လေးစားအားကျတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင်တွေ သူတို့အောင်မြင်လာအောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ ဒီလို သင်လေးစားအားကျရတဲ့လူတွေရှိခြင်းက အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ ပိုမြန်တဲ့နည်းလမ်းဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ သူများတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို လေ့လာတာက သင့်ရဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပြီး၊ အမှားဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာမလုပ်ရဘူးဆိုတာကို သင်ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄. တစ်နေ့ကို (၁) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြိုးစားနေကြသူတွေပါ။ ဘယ်သူမှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးက ဆက်လက်သင်ယူနေပြီး တိုးတက်လာအောင် နေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်နေ့ကို (၁) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုရင် နောက်ရက် ရ၀ အကြာမှာ တစ်နေ့ကို (၂) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်တိုးတက်လာတယ် (၁) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်၊ (၅) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတယ်လို့ တိုင်းတာလို့မရတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့၊ လေ့လာသင်ယူနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု၊ အသိစိတ်တစ်ခုပါ။ ဘဝရဲ့စိတ်ပညာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ၊ စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ သမိုင်း၊ စာသင်ကြားမှု ဘယ်လိုအရာကနေဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကိုသင်ယူရရှိနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။ နေ့စဉ်တိုင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက်၊ အကိုတစ်ယောက်၊ အမေတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်၊ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်၊ ဖိုက်တာတစ်ယောက်၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ စွန့်ဦးတီထွင် ပညာရှင်တစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ရွှေအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၅. အောင်မြင်ဖို့ အောင်မြင်သူတွေနားမှာနေပါ။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်အတူတူဖြုန်းလေ့ရှိကြတဲ့ လူ (၅) ယောက်ဟာ တူညီတဲ့ ပျမ်းမျှလူ (၅) ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်သူ၊ အောင်မြင်မှုရယူသူတွေနားမှာနေရင် သင်ကိုယ်တိုင်က အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူ၊ အောင်မြင်မှုရယူတဲ့သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမုန်းသမား၊ သံသယသမားတွေနားမှာနေရင် သင်က အမုန်းသမား၊ သံသယသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်မှာ ကျွန်တော့်အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့၊ ပိုပြီးကြိုးစားနိုင်ဖို့၊ ပိုပြီး ရှင်သန်နိုင်ဖို့ စိတ်အားတက်ကြွစေတဲ့ လူတွေနားမှာပဲနေဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးလောကထဲက ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ ကမာ့္ဘချန်ပီယံတွေအားလုံးက လူတော်၊ လူကောင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့ အတူလေ့ကျင့်သူတွေ၊ နည်းပြတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကမာ့္ဘချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဒီလိုစစ်တပ်တစ်ခုလုံး လိုအပ်ပါတယ်။ တခြားအလုပ်တွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ်သူမှ တစ်ယောက်တည်း အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အာဖရိက စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ် “မြန်မြန်သွားချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းသွားပါ၊ ဝေးဝေးသွားချင်ရင် အတူတူသွားပါ” တဲ့။ …………………………………………………………………………………………………. ၆. အရှုံးကိုလက်ခံပါ။ ကျရှုံးမှုက သင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ လှေကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျရှုံးမှုဆိုတာကို သင်ယူနိုင်ဖို့၊ တိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးအနေနဲ့ လက်ခံလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ကျရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျရှုံးမှုတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်နယ်ပယ်မှာမှ မကျရှုံးပဲ အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့လူကို မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေသူတိုင်းမှာ ပုံပြင်တွေရှိပြီးတော့၊ ကျရှုံးမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ကျရှုံးမှုက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် သော့ချက်ပါပဲ။ …………………………………………………………………………………………………. ၇. သင်ယူတာထက် ပိုပေးပါ။ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ယူထားတဲ့တန်ဖိုးထက် ပိုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ အရမ်းကြီးလိုအပ်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကြာရှည်လက်တွဲဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ပြီးတော့ တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုချန်ထားပေးတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ရှာတွေ့မှာပါ။ သင်ပြောင်းပြန်လုပ်မိရင်တော့ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ခြင်းက သဘာဝဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ လောဘကတော့ ရွံရှာဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေက ကမ္ဘာကြီးကနေ ဘာတွေရယူနိုင်လဲဆိုတာကို ရှာဖွေပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့လူတွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးကိုဘာတွေပြန်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာတွေကို ယုံကြည်ပြီးတော့ အဲဒီအတိုင်း တတ်နိုင်သလောက်နေထိုင်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၈. မကောင်းတဲ့ လူတွေကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်တဲ့လူတွေနဲ့ အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေ ဝန်းရံထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ လူတွေ ခဏခဏမေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီမှာ လူတစ်ယောက်ခန့်ဖို့ကျတော့ ကြာနေတတ်ပြီး၊ ဖြုတ်တာကျတော့ ဘာလို့မြန်တာလဲတဲ့။ ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်ကို ခန့်ဖို့ကြာရတဲ့အကြောင်းက ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ culture ဟာ ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါ။ မကောင်းတဲ့ culture တစ်ခုက မကောင်းတဲ့အဆင့်တစ်ခုနဲ့ နိမ့်ကျတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ခန့်တဲ့လူတစ်ယောက်တိုင်းက ကုမ္ပဏီ culture အတွက်အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မြန်မြန်ဖြုတ်တတ်တဲ့အကြောင်းကတော့ မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်က အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကို အောက်ဆွဲချတဲ့အပြင်၊ တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်လို့ လုပ်တာလောက်ဆိုးတာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ သင့်ရဲ့ဘဝမှာလည်း မကောင်းမြင်တတ်တဲ့လူ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လူ၊ အခွင့်ထူးခံတဲ့လူတွေလောက်ဆိုးတာ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုလူတွေကို သင့်ရဲ့ဘဝထဲကနေ ထုတ်ဖယ်ပစ်ဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုပေမယ့် သင့်ရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၉. အမှောင်ထက် အလင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် တိုက်ပွဲတွေက နေ့တိုင်းရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဒေါသ၊ လောဘ၊ အမုန်း၊ လက်စားချေမှုတွေနဲ့ မနာလိုသဝန်တိုမှုတွေအပေါ် ကျရောက်မသွားပါစေနဲ့။ ဒီလို မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေက မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲ သယ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ သင်က ဒီမကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေနဲ့ရှင်သန်နေမယ်ဆိုရင် မကြာခင် သံသယသမား၊ စောဒကတက်သူ တစ်ယောက်သာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လူသားဆန်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ သတိ၊ အလုပ်ကြိုးစားခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ထားကောင်းခြင်း စတဲ့ကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။ ဒါက သင့်ကို နေ့တိုင်း၊ အမြဲတမ်း ကောင်းတာတွေပဲလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်းတော့ ကောင်းမနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်းကျွန်တော် အမှောင်ထက်အလင်းကိုရွေးနိုင်ဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်။ ကောင်းမှုဆိုတာကလည်း မကောင်းမှုတွေလိုပဲ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ နေ့တိုင်း သင်ဘာကိုရွေးချယ်နေလဲဆိုတာ သတိထားပါ။ သင်က သင်ရွေးချယ်တဲ့အတို်င်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၁၀. သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ပါ။ ကျရှုံးမသွားနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေ။ မကောင်းတဲ့အရာတွေက ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးက မတရားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့လူတွေကို စောလျင်စွာဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကံမကောင်းတဲ့အခါတွေလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကတိပေးပါ။ သူရဲကောင်း စိတ်ဓာတ်ရှိပါစေ။ သင်ပြန်ထပြီး တိုက်ပွဲကိုဆက်တိုက်နေသေးရင် သင်ဘယ်နှစ်ခေါက်လဲကျသွားခဲ့တယ်ဆိုတာက အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ ဒါတွေက ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံနဲ့ ဘဝတန်ဖိုးတွေကနေရရှိလာတဲ့ စည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ ကိုက်ညီချင်မှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းတွေပါ။ သင်တို့ကိုလည်း ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်ချစ်တဲ့အရာတွေအတွက် ရှင်သန်ပါ။ အရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့။ ...
ရေဘယ်လောက်သောက်သောက် ရေငတ်မပြေတဲ့ ပူပြင်းလှတဲ့နွေရာသီမှာ ရင်ထဲအေးမြသွားအောင် တစ်ခုခုတော့စားချင်နေတယ်မလား?? သိနေတယ်လေ။ 😏😏😏 Foodie အချင်းချင်းပဲဟာ။ 😑😑😑 အပြင်မှာနေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ပျော်ကျမတတ်ပူနေတော့ အပြင်ထွက်ဖို့ကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ အိမ်မှာပဲတစ်ခုခုလုပ်စားကြတာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ 💯💯💯 စားလို့လည်းကောင်း၊ ရာသီပေါ်စာလေးလည်းဖြစ်တဲ့ သရက်သီလေးနဲ့ပဲ အချိုပွဲတွေလုပ်စားရင် နွေရာသီနဲ့ ကွက်တိပဲလေ။ ကဲ ဒီတော့ – 1. Homemade Mango Ice-cream ပါ၀င်ပစ္စည်းများ – Heavy cream ­- နို့ဆီခွက်၂ ခွက်Powdered sugar – နို့ဆီခွက် ခွက်တစ်ဝက် သရက်သီးအနှစ် – နို့ဆီခွက်၏လေးပုံသုံးပုံ အဝါရောင်ဆိုးဆေး – အနည်းငယ် Heavy cream ရယ် powdered sugar ရယ်ကို ရောပြီးမွှေပါ။ နောက်ပြီး သရက်သီးအနှစ်ကိုပါ ထည့်ပြီး ရောသမမွှေပေးပါ။ သရက်သီးအရောင်လေး ပိုသမ်းနေစေဖို့ အဝါရောင်ဆိုးဆေးလေး တစ်စက်၊ နှစ်စက်ထည့်လိုက်မယ်။ မွှေရင်းမွှေရင်းနဲ့ အနှစ်လေးကသိပ်သိပ်လေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ ဘူးကြီးကြီးတစ်ခုထဲ ထည့်လိုက်ပြီး (၈) နာရီလောက် ခဲထားပြီးတဲ့နောက် homemade mango ice-cream လေးရပါပြီ။ Topping အနေနဲ့ ဂျယ်လီလေးတွေထည့်ပြီးစားတော့ very good ပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. 2. Mango Creamy ပါ၀င်ပစ္စည်းများ – သရက်သီးအတုံးလေးတွေVanilla Ice-cream – ၂ ခု Whipped cream – ၁ ဗူး ဒီ dessert လေးကတော့ လုပ်ရတာအလွယ်ဆုံးပါ။ ၀ိုင်ခွက်လိုခွက်မျိုးကိုမှ နည်းနည်းခပ်ပုပုခွက်လေးနဲ့စားကြမယ်လေ။ အဲဒီခွက်ထဲမှာ အရင်ဆုံး vanilla ice-cream ၂ခုကို အောက်ခြေမှာထည့်လိုက်ပါမယ်။ နောက်ပြီး သရက်သီးအတုံးလေးတွေကို အပေါ်ကဖြူး၊ သူ့အပေါ်ကနေ whipped cream လေးတွေကို တရှုးရှုးနဲ့ဖြန်းလိုက်ပါ။ သဘောပါရင် ပါးစပ်ထဲပါ တစ်ခါတည်းဖြန်းလိုက်ပေ့ါ။ 🤣🤣🤣 ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သရက်သီးအတုံးလေးတွေကို အပေါ်ကနေထပ်တင်လိုက်ပါ။ ကဲ ဘယ်လောက်လွယ်လဲ။ …………………………………………………………………………………………………. 3. Mango Ice-cream shake ပါ၀င်ပစ္စည်းများ – သရက်သီး အတုံးလေးတွေသရက်သီးရေခဲမုန့် – ၄ ခု သကြား – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းနွားနို့ – နို့ဆီခွက် ၁ ခွက် ရေခဲ – ၆ တုံး ချိုချိုမွှေးမွှေး ice-cream shake လေးကတော့ ဒုတိယအလွယ်ဆုံးပေါ့။ ရေခဲမုန့် ၂ ခု၊ သကြား၊ နွားနို့နဲ့ ရေခဲ အကုန်လုံးကို blender ထဲထည့်ပြီးဖျော်လို်က်ပါ။ သရက်သီးရေခဲမုန့်လေးကိုတော့ homemade ice-cream လေးထည့်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဖျော်ပြီးရင် ခွက်ရှည်ရှည်လေးထဲထည့်ပြီး အပေါ်ကနေ ကျန်တဲ့ရေခဲမုန့် ၂ ခုကို တင်လိုက်ပါ။ သူ့အပေါ်မှာတော့ တုံးထားတဲ့သရက်သီးတွေကို topping အနေနဲ့ အလှဆင်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။ ………………………………………………………………………………………………… 4. Mango Crepe Cake ပါ၀င်ပစ္စည်းများ – ကြက်ဥ – ၂ လုံးနွားနို့ – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းထောပတ်အရည် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းဂျုံမှုန့် – နို့ဆီခွက် ၁ ခွက်သကြား – နို့ဆီခွက် ၁ ခွက် ဆား – အနည်းငယ်Vanilla extract – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း အဝါရောင်ဆိုးဆေး – အနည်းငယ် Heavy whipping cream – နို့ဆီခွက် ၁ ခွက်Powdered sugar – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းသရက်သီးအတုံးလေးတွေ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခွက်ကြီးကြီးထဲမှာ ကြက်ဥ ၂ လုံးကိုထည့်ပြီး ခလောက်ပေးပါ။ နွားနို့ရယ် ထောပတ်အရည်ရယ်ကိုပါ ထည့်ပြီးမွှေပါ။ နောက်ပြီး ဂျုံမှုန့်ကိုပါထည့်လိုက်ပါ။ မွှေရင်းခပ်ပြစ်ပြစ်အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့အခါ သကြားပါထည့်ပေးပါ။ ဆားနည်းနည်းယူပြီး လက်လေးနဲ့ဖြူးလိုက်ပါ။ Vanilla extract ထည့်ပြီး အဝါရောင်ဆိုးဆေး တစ်စက်၊ နှစ်စက် ထည့်လိုက်ပါ။ အိုးကိုဆီလေးနည်းနည်းလူးလိုက်ပြီး တစ်ရှုးလေးနဲ့ နည်းနည်းပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ မီးအေးအေးလေးထားပြီး စောစောကလုပ်ထားတဲ့ အနှစ်တွေကို ခပ်ပါးပါးလေးဖြစ်အောင်ကြော်လိုက်ပါ။ အခုလုပ်ထားတဲ့ အနှစ်ပမာဏနဲ့ဆို 3/4 ချပ်လောက်တော့ အသာလေးရပါတယ်နော်။ အထဲမှာ ဌာပနာဖို့အနှစ်အတွက်ကတော့ heavy whipping cream ထဲကို power sugar ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် cream အနေအထားရတဲ့အထိ မွှေလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင်တော့ စပြင်ဆင်လို့ရပါပြီ။ စောစောကကြော်ထားတဲ့ အနှစ်ပြားအပေါ်ကို မွှေထားတဲ့ heavy whipping cream လေးပုံလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး သရက်သီးအတုံးလေးတွေပါ ထည့်လိုက်ပြီး၊ လေးထောင့်တုံးလေးဖြစ်အောင် ခေါက်လိုက်ပါ။ ခေါက်တာ လှစရာမလိုပါဘူး။ မသေသပ်တဲ့ပိုနေတဲ့ ထောင့်စွန်းတွေကို အောက်ဘက်ကိုလှန်ထားလိုက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အရသာရှိလှတဲ့ crepe cake လေးကို ပိုက်ဆံသိပ်မကုန်ဘဲ တဝကြီးစားလို့ရပြီပေါ့။ …………………………………………………………………………………………………. 5. Mango Overnight Oat ပါ၀င်ပစ္စည်းများ – အုတ်ဂျုံ – ထမင်းစားဇွန်း ၄/၅ ဇွန်းနို့ – အတော်အသင့် Vanilla essence – အနည်းငယ်ဆား – အနည်းငယ် ပျားရည် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းသရက်သီး အဖုံးပိတ်လို့ရမယ့် ဖန်ဘူးထဲကို အုတ်ဂျုံလေးတွေထည့်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး အုတ်ဂျုံလေးတွေနဲ့ တန်းတူ level လောက်အထိ နို့ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါ။ Vanilla essence ၁ စက်၊ ၂ စက်လောက်နဲ့ ဆားအနည်းငယ်လောက်လည်း ထည့်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ပျားရည်ထည့်ပြီးမွှေပြီးရင်တော့ overnight oat လေးရပြီပေါ့။ Overnight oat ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ညလောက်တော့နှပ်ရမယ်နော်။ မနက်ရောက်ရင်တော့ ခွက်အသစ်ထဲကို နှပ်ထားတဲ့ oat နည်းနည်းယူပြီး ၁ ထပ်အရင်ထည့်၊ ပြီးရင် သရက်သီးတွေကို blender နဲ့ကြိတ်ပြီး သရက်သီးအရည်တွေကို oat တွေအပေါ်နောက်တစ်ထပ်ထည့်ပေးပါ။ နောက်ပြီး oat တွေတစ်လှည့် တစ်ထပ်ပြန်ထည့်၊ သရက်သီးအရည်လေးကိုလည်း နောက်တစ်ထပ်ထည့်ပြီး အပေါ်ကနေ သရက်သီးအတုံးသေးသေးလေးတွေနဲ့ အလှဆင်လိုက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် လှပတဲ့ layer လေးနဲ့ mango overnight oat လေးရပြီပေါ့။ အခုဆို လွယ်ကူတဲ့ ပြုလုပ်နည်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် သရက်သီးအချိုပွဲလေးတွေလုပ်စားနိုင်ပြီပေါ့။ မိသားစုတွေနဲ့ပဲစားစား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲစားစား၊ ချိုချိုမွှေးမွှေး သရက်သီးလေးနဲ့ နေပူပူမှာ အေးမြတဲ့အချစ်တွေဖော်ပြနိုင်ပြီလေ။ ❤️️❤️️❤️️ ...